Global gold price eased, but the local prices show no reflection | Myanmar Business Today
HomeBusinessGlobal gold price eased, but the local prices show no reflection
The local gold market saw onlyaslight price fluctuation without reflecting the global gold market where the gold price dropped.
The global gold price was at $1,906 per ounce on October 24 and dropped to $1,881 on October 29.
However, the local gold price stood at K1.3115 million per kyattha (=0.57 ounce) on October 29 compared to K1.315 million on October 24.
On October 29, the Yangon gold market closed at K1.3118 million for selling price and K1.3108 million for buying price.
The exchange rate on October 24 was K1,314-1,318 per dollar compared to K1,310-1,315 on October 29.
The global gold price often drops during the US election and the price can change depending on the US presidential transition, according to observers.
ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးကျဆင်းလာသော်လည်း ပြည်တွင်း ရွှေစျေးနှုန်း သိသိသာသာကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲ ထောင်ဂဏန်းမျှသာ အကျရှိကြောင်း ရွှေဘုံသာ ရွှေစျေးကွက်မှ သိရသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေစျေးနှုန်းမှာ အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက် နေ့ တွင် တစ်အောင်စလျှင် ၁၉၀၆ ဒေါ်လာရှိခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်နေ့တွင် တစ်အောင်စ လျှင် ၁၈၈၁သို့ ကျဆင်းလာခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်စျေး ကွက်၌ အခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၁၃၁၄၀၀၀ဖြင့် အဝယ်စျေးနှုန်းရှိခဲ့ပြီး ကျပ် ၁၃၁၅၅၀၀ ဖြင့် အရောင်းစျေး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေ စျေးနှုန်း ကျဆင်းလာသော အောက်တို ဘာ ၂၉ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်စျေး ကွက်၌ အခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၁၃၁၀၈၀၀ဖြင့် အဝယ်ပိတ်ခဲ့ပြီး ကျပ် ၁၃၁၁၈၀၀ ဖြင့် အရောင်းပိတ်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၄ရက်နေ့တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကန်ဒေါ်လာ စျေးနှုန်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်ဒေါ်လာလျှင် 1314 -1318 ဝန်းကျင်ဖြင့် အရောင်းအဝယ် ရှိခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၉ရက်နေ့တွင် ကန်ဒေါ်လာ တစ်ဒေါ်လာလျှင် 1310 -1315 ဝန်းကျင်ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ သည်။
လက်ရှိအချိန်သည်အမေရိကန်နိုင်ငံ၌ရွေးကောက်ပွဲ ကာလဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာ့ရွှေစျေး နှုန်းမှာ အကျဘက်သို့အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ် နေကြောင်း အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ကာလ တွင် သမ္မတအပြောင်းအလဲပေါ်မူတည်၍ ရွှေစျေးပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း လေ့လာသူတို့က သုံးသပ်ကြသည်။
Previous articleReal Estate Market Sees Very Few Buyers
Next articleMinister of Commerce Calls for Precautions to Mitigate Impact on Trade